Fantastical 2, dị na Mac App Store yana mbelata euro 10 | Esi m mac
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, ngwa kalenda macOS nke ụmụ amaala zuru oke maka nhọpụta kalịnda ma ọ bụ ndetu ha. Agbanyeghị maka ọtụtụ ndị ọzọ, ebe isiokwu bụ akụkụ bụ isi nke ọrụ ha, o nwere ike ịbụ mkpụmkpụ ma ọ bụ mkpụmkpụ. Nke a bụ ebe Fantastical 2 na ngwa ndị ọzọ nke atọ nwere ebe iji jikwaa nhọpụta na ncheta anyị, ọ bụ ezie na ọ kachasị Fantastical 2. Kemgbe ọtụtụ afọ, ngwa a abụrụla ntụnye aka na iOS na gburugburu ebe obibi iOS, maka ọtụtụ ndị mmepe, a na-atụle ya nke kachasị mma, ọ bụ ezie na kalenda iOS 5 ọ bụ ihe ọzọ na-eguzo ọtọ ya n'ụzọ zuru oke.
Fantastical maka macOS gụnyere atụmatụ ndị dị ike dịka igwe nyocha asụsụ na-enweghị nghọta, nke na-amata ederede ederede iji gbanwee ya na kalenda oru. Anyị kwesịrị ịgwa ya Nri ehihie na Luis na Fraịde na 13 na nhọpụta ga-akpaghị aka ga-agbakwunye na kalenda, na-enweghị ịtọọ oge anyị onwe anyị. Ọ na-enye anyị nkwado maka iCloud, nkwado oge mpaghara, echiche kalenda dị iche iche, ndepụta ihe omume amamịghe, windo nweere onwe ya nke ụbọchị, izu, ọnwa na afọ, wijetị taa maka ebe ngosi, kalenda site na otu.
Ọzọkwa egosiputara anyi maapi nke ebe ndi oru a, nwere isiokwu gbara ọchịchịrị, dakọtara na kalenda nkwado CalDAV, yana iCloud, Yahoo, Google, Outlook ... Ọtụtụ bụ teknụzụ teknụzụ nke toro ọrụ na njirimara nke ngwa a, yana ihe akaebe nke a anyị nwere Nkezi ọkwa maka ngwa ahụ, ọkwa nke 4,5 kpakpando n'ime ise Fantastical 2 ka a sụgharịrị gaa na Spanish, German, French, English, Italian na Japanese, chọrọ macOS 10.11.5 na nhazi 64-bit. Ọnụ ego ya bụ 49,95 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Fantastical 2, dị na Mac App Store yana mbelata euro 10